Jihaad - Wikipedia
Afgarad islaami ah oo laga wado hadal kasta iyo ficil kasta oo lagu faafinayo diinta ama ka hotagida cadawga islaamka ama xureynta dhul muslimiin oo la qabsaday
Kani waa maqaal ku saabsan jihaadka ay aaminsan yihiin dadka Islaamka ah.
Jihaad (ingiriis: jihad; carabi: جهاد‎ "jihād") waa erey lagu isticmaalo diinta Islaamka taasi oo u taagan dagaal naf, xoolo, dhaqaale, fikir, wakhti, hiil iyo hoo la bixid ah si loo difaaco mabaadii'da iyo jiritaanka diinta Islaamka ah. Sida meelo badan oo kitaabka Quraanka ah ku xusan jihaadku waa mid waajib ku ah dhamaan dadka muslimiinta ah in kastoo lagu kala badan yahay waajibaadkaasi. Sida caadiga ah waxaa jira dhowr nooc oo jihaad ah, waxaa ka mid ah:
Jihaad dagaal: waa mid khasab ku ah qof kasta oo muslim ah, qaangaadh ah, hub qaadi kara oo dagaal geli kara.
Jihaadka dhaqaalaha: dadka qaniga ah ee wax heysta waxaa waajib ku ah ineey ku bixiyaan jihaadka qeyb ka mid ah xoolohooga. Waxaa intaas dheer in qofkaas laga rabo inuu isla markaa ka qeyb qaato dagaalka nafsi ahaan.
Jihaadka nafta: waa marka qofka laga rabo inuu naftiisa ku khasbo waajibaadka diiniga ah ee saaran si uu u fuliyo amarada shaqsi ahaaneed.
Guud ahaan, jihaadku waa dagaal naf huris ah oo loo galayo sidii loo fulin lahaa ama loo dhowri lahaa mabaadii'da diinta Islaamka. Taas macneheedu ma ahan in lala dagaalamayo dhamaan qof kasta oon aaminsanahay diinta Islaamka. Laakiin waa ilaalinta iyo difaaca diinta oo kali ah. Jihaadku waa waajibaad saaran dhamaan muslimiinta si loo ilaaliyo jiritaanka, sumcada iyo karaamada diinta Islaamka.
Jihaadku wuxuu bilaabmey wakhtiyadii ugu horeeyay ee soo ifbaxa iyo fiditaanka diinta Islaamka. Wakhtiyadaasi oo dadka Muslimiinta ahaa u dagaalamayeen si ay u helaan xoriyad, nabadgelyo iyo amni dadkii ay la noolaayeen. Dagaaladaasi ugu horeeyay waxaa ka mid ah Dagaalkii Beder, Dagaalkii Uxud, Dagaalkii Dhufeysyada, Dagaalkii Kheybar, Dagaalkii Xunayn, Dagaalkii Tabuk iyo kuwo kale oo ka dambeeyay.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jihaad&oldid=221682"
Last edited on 26 Oktoobar 2021, at 21:28
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Oktoobar 2021, marka ee eheed 21:28.